Zandarimaria-BNI : miara-miasa miady amin’ny famotsiam-bola | NewsMada
Zandarimaria-BNI : miara-miasa miady amin’ny famotsiam-bola
Raikitra ny fiaraha-miasa eo amin’ny zandarimaria sy ny BNI Madagascar. Natao, omaly, ny sonia eo amin’izay fiaraha-miasa izay, teo amin’ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard, sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria sy Alexandre Mey, tale jeneralin’ny BNI. Hanohana ny zandary amin’ny fanatsarana ny asan’izy ireo ny banky amin’ny fanomezana fiofanana, miaraka amin’ny fitaovana, toy ny natolotra ny Sekolin’ny zandarimaria ao Ambositra ; fiaraha-miasa amin’ny fanampiana zaza kamboty sy ny maro hafa ho fanatanterahana ny iraka sahanin’izy ireo.
Endriky ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina izany, samy mandray ny tandrify azy hiadiana amin’ny kolikoly sy famotsiam-bola amin’ny alalan’ny fampiharana ny lalàna. Ao anatin’ny tolotra « Pack mpiasam-panjakana » omen’ny BNI, maro ny tombontsoa avy amin’ny BNI, toy ny fanokafana petra-bola, fampifandraisana ny MVola amin’ny fitantanana tahiry, tolotra ho an’ny fiantohana, fanjifana, fanaovan-trano. Ireo rehetra ireo mifandraika amin’ny zana-bola zakan’ny rehetra. Misy ny « tolotra Tosika », ohatra, ho an’ireo zandary vaovao hanampiana azy ireo any amin’ny faritra hiasany.
Samy nanambara ny roa tonta ho fanamafisana ny fiaraha-miasa. Ho an’ny BNI, ao ireo mpiasa ao aminy hanoro lalana sy hanamora ny fidiran’ny zandary ao amin’ny banky. Marihina fa mbola ambany dia ambany ny tahan’ny fampiasana banky eto amintsika, 4 % monja.